LAMKAM AH RALHRANG A THIMI PAWL RUAK AN PHUM – The Chinlung Post
Mindat Kahdohnak ahaThimi SAC Ralhrang pawl Ruak Lamkam ah an Phum Hna.May 21 ahacangmi Mindat peng, Bukun khua kahdohnak ah SAC ralhrang lei inathimi ruak pawl cu anmah ralhrang hawile nih lamkam ah an phum hna, tiah Mindat mipi uknak bu nih nihin zaanlei ah thawngpang an chuah. Nizaan kahdohnak ah CDF-Mindat lei in Salai Thang Naing nihanunnakapek i, ralhrang lei inatlawm bik minung5an thi.
Mindat mipi uknak bu nih, “Nizaan kahdohnak ah SAC ralhrang lei inatlawm bik minung4an thi. An ruak pawl cu lamkam ah an phum hna. A hmutu an um,” tiahalanghter. Cu lawng si loin, nizaan kahdohnak ah SAC ralhrang pawl hi ritsi an hmang in misawhsawh thilpuan i hruak in CDF-Mindat pawlarak kan kah.
Ritsi an i chunhnak syringe (siichunhnak/ဆေးထိုးအပ်) le mortar bomb hawng pawl zong kan hmuh hna, tiah an langhter chap. Bukun khua i May 21 kahdohnak ruang ah ramlak ah nulepa nih an zaampi vemi ni6bawhte zong nihin chun ahanunnakaliam. မင်းတပ်တိုက်ပွဲတွင် သေဆုံးသွားသော စကစအလောင်းများအား လမ်းဘေးတွင် မြုပ်ထားဟု မျက်မြင်သက်သေများပြော. မနေ့ မေလ ၂၁ ရက်နေ့က မင်းတပ်မြို့နယ်၊ ဘူကွန်းရွာတိုက်ပွဲတွင် စကစဘက်မှ ၄ ဦး၊ ၅ ဦးခန့် သေဆုံးပြီး ၎င်းတို့ရဲ့အလောင်းများကို လမ်းဘေးတွင်မြုပ်ထားသည်ဟု မျက်မြင်သက်သေများက မင်းတပ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထံသို့ ပြောသည်။
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများသည် ဘူကုန်းရွာသို့ လာရောက်မတိုက်ခိုက်ခင် လမ်းခုလတ်ဖြစ်သော ပိန်ယောရွာတွင် မူးယစ်ဆေးဝါးများ၊ ဘိန်းဖြူများ အသုံးပြုပြီးနောကအသုံးပြုပြီး ကို လာရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု မင်းတပ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က ဆိုသည်။ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများ မူးယစ်ဆေးအသုံးပြုစဥ် အသုံးပြုသော ဆေးထိုးအပ်များ၊ ဆေးခြောက်များ၊ လက်နက်ကြီးဗုံးခွံများကိုလည်း တွေ့ရှိကြောင်း မင်းတပ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်သည်။ Credit: The Chin Journal